Isu takaedza iyo Juuk Korza tambo yeApple Watch Series 4 | Ndinobva mac
Nhasi tine mukana wekukuratidza iwe mutsva wekuunganidza mabhanhire Dhizaini yeJuuk, ndiyo muenzaniso weKorza mutsvuku. Iri tambo yakagadzirwa neganda uye ine musvo mutsvuku nerutivi. Pasina kupokana, mhando iyi yemabhande inoratidzira mhando yepamusoro muzvigadzirwa zvekugadzira, saka hatisi kubata nezvigadzirwa zvakachipa kwazvo kuti titaure.
Mune ino kesi uye sekutaura kwangu tine mukana wekuyedza iyo Juuk Korza ine mitsvuku mitsvuku nemativi, ine clasp uye anchor zvewatch mune space grey kara kuti ienzane newachi. Aya marudzi etambo akasarudzika kune vashandisi vanosarudza tambo dzeganda uye yemaitiro echinyakare kunyangwe hazvo iko kuvhara kuri kuitika.
Pasina mubvunzo imwe yemafemu ane isu murudo kana tichitarisa kugadzirwa kwetambo iyi ndiJuuk. Juuk atova nenhoroondo refu mukugadzirwa kwemarudzi ese emabhanhire emhando dzakasiyana dzeApple Watch izvo zvatiinazvo mumusika, uye kunyangwe chiri chokwadi kuti vakave nedambudziko nekuenderana kwemabhande mukuchinja kweApple Watch Series 0,1,2,3 maringe ne4, vazvigadzirisa zvakanaka uye nekukurumidza .
1 Makore akasiyanasiyana anowanikwa iwo matsva Juuk Korza
2 Kugadzira zvinhu zveJuuk Korza
Makore akasiyanasiyana anowanikwa iwo matsva Juuk Korza
Pamusoro pekuve nemaviri mamodheru ewachi anopedzisa mune sirivheri kana mune grey girafu, aya mabhande matsva kubva kukambani anowedzera akasiyana siyana mavara anowanikwa kune ese manakiro. Mune ino kesi iri iwo mavara matsvuku, orenji, nhema, chena, girini, bhuruu uye yero. Sezvatakambotaura, aya mavara anoratidzwa zvese parutivi rwematambo uye mune musono weiyo imwe chete, ichipa kupera kwakanaka kwazvo kune iyo yese.
Kugadzira zvinhu zveJuuk Korza
Nezvakanaka zvakapedzisa zvese mukuvhara uye mukumisikidza kwebhokisi, izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakugadzira izvi Juuk Korza zvakanaka kwazvo. Iyo dehwe rinoshandiswa rinobva kuItari uye isu tinofanirwa kutaura kuti ukobvu hweizvi hwakanyanya saka pakutanga kusvikira ganda risingachinjike pachiuno chedu zvinova zvisinganzwisisike kushandisa. Vaya vashandisi vakatonakidzwa nemhando iyi yematehwe ematehwe vachaziva zvandiri kutaura nezvazvo, asi mumazuva mashoma vanoenderana zvakakwana.
Kuvhara kwakavanzwa mukati me tambo uye iri zviri nyore chaizvo kushandisa zvese kuvhara uye kuvhura tambo Uku ndiko kuvharwa kwakafanana dhizaini iyo inoshandiswa kuna Juuk Monza naJuuk Viteza. Kupedzisa kwezvikorekedzo izvi zvinouya muvara unoenderana nezvimwe zvakasara zvetambo, saka kana ukasarudza iro dema dema, iyo clasp ichavewo iri dema uye, nekusiyana, mune yesirivara ruvara iyo clasp ichave yakafanana.
Wedzera iyi kodhi "soy10" isina makotesheni panguva yekutenga uye tora 10% dhisikaundi pakutenga kwako maJuuk tambo.
Bhandi reApple Tarisa Juuk Korza
Chinhu chakajairika mumatehwe ematehwe, chimwe chinhu "chakaoma" kana chitsva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu takaedza iyo Juuk Korza tambo yeApple Watch Series 4
Iyo modular dhizaini yeiyo nyowani Mac Pro inogona kureva akawanda madhiraivha pamusoro peumwe neumwe
Midziyo yemhete inosangana ne Alexa